Ma Fiicantahay In Aasaas Loogu Sameeyo Koonto Gaara Instagram-ka Ganacsi? ➡️ Raacayaasha ▷ ➡️
January 20, 2019 0 comments 1640
Markaad leedahay koonto Instagram waxaad badanaa raadineysaa inaad sida ugu fiican u sameyso ganacsi bilow, raadi kuwa raacsan, waxay leeyihiin tiro badan oo xisaab ah oo laxiriira isafgaradka ka dhexeeya ganacsatada iyo istiraatiijiyado kale oo badan.
Laakiin maxaa ku wanaagsan geli koontada gaarka loo leeyahay ee Instagram shirkad? Hagaag, caadi ahaan markaan abuuro koonto cusub shabakaddan bulsheed ee caadiga ah ayaa la soo dhigay dadweyne, tan macnaheedu waa in isticmaale kasta oo heli kara xogtaada uu arki karo qoraal kasta oo aad sameysid.
Maxaad waayi kartaa hadaad xisaabta shirkadaada gasho qaab gaar ah?
Runtii Kuguma keydin kartid akoon ganacsi si gaar ah, Tani waa qayb ka mid ah siyaasadaha Instagram. Nasiib darrose, markii aad boggaaga u rogto akoon gaar ah, dhowr hawlood ayaa lumay, halkan waxaa ku yaal qaar:
Hadaad xiriiri koontadaada
Adigoo isticmaalaya Facebook-ga, waxaad ku wadaagi kartaa isla boggaga isla boggaas. Kuwani lagama wadaagi karo akoonnada kale.
Nuxurkaagu kama muuqan doono kombiyuutarka.
Marka isticmaale arki kara nuxurkaaga jecel ama faallooyin ka bixiyo midkoodna dhejintaada, tani kama muuqan doontid tabanka "kan socda".
Xaddid xaddiga si adeegsadayaasha kale ay kuu arkaan.
Calaamadaha aad isticmaaleysid looma arki karo isticmaaleyaasha kale ee aan adiga ku raacin.
Qofna aan haysan oggolaanshahaaga ma arki karo wax qoraalladaada ka mid ah.
Maxaad sameyn kartaa si aad u dhigto astaantaada gaarka ah?
In kasta oo aadan shirkaddaada gelin karin hab gaar ah, waxaan qaadi doonnaa tallaabooyin aan raacno si astaan ​​kasta oo shaqsiyeed oo aad leedahay loo dhigo qarsoodi.
Ku fur barnaamijka 'Instagram' koontada aad rabto.
Ka hel koontadaada oo tag boggaaga guud.
Guji ikhtiyaarka oranaya "xulashooyinka / dejimaha".
Xulo "koonto gaar ah", markii la xusho waxay ku weydiin doontaa inaad xaqiijiso haddii aad ku raacsan tahay ficilkan.
Xulashada haa, akaawnku wuu isbadali doonaa adigana waxaad yeelan doontaa akoon gaar ah.
Waxa kaliya ee ay tahay inaad maskaxda ku hayso waa in faa'iido darrooyinka aan soo bandhignay ay sidoo kale ku dhici doonaan isla xisaabta noocaan ah. Si kastaba ha noqotee Lahaanshaha akoon gaar loo leeyahay maahan wax xun, maadaama ay tani u abuuri karto faa iidooyin kuu ah astaantaada.
Akoonno badan oo gaar loo leeyahay Instagram taas oo ah akoonno gaar loo leeyahay oo la adeegsado oo laga helo akoonkooda gaarka ah, taasoo ka dhigeysa dadka isticmaala inay diraan codsiga ka dibna la aqbalo.
In kasta oo taasi aysan dammaanad ka qaadaynin inaad leedahay caan caan ah marka loo eego dadka isticmaala, waxaa suurtagal ah haddii aad adeegsato istiraatiijiyad ballaaran oo xayeysiis ah inaad awoodi karto inaad hesho tiro badan oo raacsan.
Talooyin si aad ganacsi uga socodsiiso Instagram-ka
In kasta oo aan hore u ogayn inaadan u dhigayn karin xogta guud ee shirkad ahaan mid gaar loo leeyahay, waxaad ka heli kartaa faa'iidooyin badan adoo bulshada u soo bandhigaya.
Inkastoo ay run tahay Instagram wuxuu u shaqeeyaa dhowr shirkadood shirkad kasta ma yeelan karto astaan ​​guud. Taasi waa sababta, muddo dheer ka hor intaadan bilaabin mashruuca, waa inaad si fiican uga fiirsataa haddii shirkaddaada ay si wanaagsan u aqbali karto mashruuca noocan ah.
Waa inaad lahaataa istiraatiijiyad warbaahinta bulshada ah, ujeedka ugu weyn ayaa ah inaad awood u yeelato inaad la xiriirto macaamiil badan isla markaana habkaas aad ku xoojin karto astaantaada. Kaliya markaa awood uma lihid inaad ku shaqeyso meheraddaada sida ugu fiican ee ay karto.
Haddii ay jiraan wax ay tahay inaadan iska indho tirin waa magaca shirkadda ee shabakadda bulshada, waxa ugu fiican ee aad sameyn karto waa inaad magaca u dhigto mid fudud oo macquul ah. Tani waxay u oggolaaneysaa dhammaan isticmaaleyaasha inay kuu helaan si fudud.
Sharaxaadu waa inay noqotaa mid aad u fudud, waa inaysan qaadan wax ka badan seddex xariiq. Ka hadal waxa ay shirkaddaadu sameyneyso oo sii iyaga taabashadaas xiisaha leh si ay iyagu wax badan uga ogaadaan badeecadaada.
Ha iloobin dar url Si toos ah websaydhka shirkaddaada, tani waxay ka caawin doontaa iyaga oo keliya inay marin u lahaadaan shabakaddaada bulshada laakiin sidoo kale bogga ugu weyn sida, halkaas oo ay ku arki karaan wax aad uga badan waxaad soo bandhigto.
Sida ugu fudud ee ugu fiican, waxa ugu fiican ee aad sameyn kartaa waa adeegsiga sumadda shirkadda ama muuqaal aasaasi ah oo adeegsadayaashu si fudud u aqoonsan karaan iyadoon loo eegeyn inay ka arkeen astaanta ama barta kale.
Waxa shaley la hirgaliyay ayaa ah in labada shabakadood ee bulshada ay gacanta u galaan, marka waad awoodaa isku xira labada xisaabaad iyo inay lahaadaan a taraafikada wanaagsan labadaba xisaab iyo mid kale. Tan macnaheedu maahan inaad ku qasban tahay inaad ku dhigto isla isla xisaabtan labada xisaabaad, waa inaad bedeshaa waxa ku qoran adigoon khasaarin.
Sawirada aad soo geliso oo ay la socdaan tayada iyaga ayaa ah inay ugu fiican yihiin, mid kastoo sawirro ah waa inaad ku muujisaa sheyga sida ugu wanaagsan ee suurtagalka ah, halkaas oo aad uga mahadcelin karto mid kasta oo ka mid ah faahfaahinta badeecooyinka aad u soo bandhigto dadweynaha.
Haashta runtii waa muhiim Si aad shirkad ugu meelayso, iyaga ayaga u maraya si sahlan ayaa loo heli karaa waxayna u saamaxdaa kuwa daneynaya badeecada inay si fudud ku helaan.
1 Maxaad waayi kartaa hadaad xisaabta shirkadaada gasho qaab gaar ah?
2 Maxaad sameyn kartaa si aad u dhigto astaantaada gaarka ah?
3 Talooyin si aad ganacsi uga socodsiiso Instagram-ka
3.1 Hubso shirkaddaada
3.2 Abuur istaraatiijiyad
3.3 Magaca Koontada
3.4 Sharraxaadda shirkaddaada
3.5 Sawir sawir
3.7 Sawiro wanaagsan
3.8 Hashagag badan
Halkan wax ka baro sida aad ugaadhsankarto qoraallada barta Instagram